Nooca qarixii Zoobe, halka uu ku socday, iyo sababta Shabaab u sheegan waayeen!! – Xeernews24
Nooca qarixii Zoobe, halka uu ku socday, iyo sababta Shabaab u sheegan waayeen!!
18. Oktober 2017 /in Qormooyin/Articles /von admin
Gaadhi Xamuul ah oo laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa ayaa Sabtidii ku dilay Muqdisho in ka badan 300 oo Qof, sidoo kalana 400 oo kale dhaawacay.
Weerarkan ayaa ah kii ugu Khasaaraha badnaa ee Taariikhda ka dhaca Somalia, Waxaa sidoo kale loo aqoonsaday Weerarkii ugu khasaaraha badnaa 11 September kadib ee ka dhaca Caalamka.
Dunidda oo dhan ayaa laga dareemay Weerarkan,
Haddaba waa kuwan 4- Su’aalood oo ay tahay in wax la iska waydiiyo dhacdadan.
Xaguu ahaa Bartilmaameedku, ?
Gaarigan oo Noociisu ahaa TM wuxuu ku qorxay Isgoyska Zoppe ee Degmadda Hodan oo ah Waddo Ganacsi oo aad u Mashquul badan, ayna ku yaalaan Dukaamo badan, Hoteelo iyo Goobo Ganacsi oo kale.
Goobta ay wax ka dhaceen kuma oolin Xarun Dowladeed, Xero Ciidan, iyo Meel Istaraatiiji Ciidan ah toona.
Matt Bryden oo ah Khabiir ka faalooda Arrimaha Amniga Geeska Afrika ayaa yiri “Lama Hubo in KM5 uu ahaa Bartilmaameed loo qorsheeyay Weerarkan”.
Geesta Kale Illo Wareedyo Amni oo codsaday inaan magacooda loo isticmaalin Warbaahinta ayaa rumaysan in Gaariga uu ku socday Bartilmaameed aan ahayn halka uu ku qarxay, waxna ka qaldameen.
Aragti kale oo Suuragal ah ayaa waxay tahay in Gaariga Wayn ee lagu dhamaaday uu wehliyay Gaari kale oo Ciidanka Ammaanku qabteen, Waxaana Gaariga 1-aad sida muuqata qorshuhu ahaa in lagu dhufto Ciidanka ku gadaaman Goob Bartilmaameed u ahayd, Gaariga 2-aad-na uu gudaha u galo Goobtaasi, si uu u gaaro Bartilmaameedka ugu dambeeyay.
Qaraxa Dadka badan ku dhamaadeen goobta uu ka dhacay waxaa jira warar sheegaya inay taagnayd Booyad Shidaal, taasoo sii kordhisay Khasaaraha, sidoo kalana waxaa ku yaalay Goobta ay wax ka dhaceen Meelo lagu iibiyo Shidaal.
Arrinta kale ee u baahan Sharaxaada ayaa ah haddii Booyad Shidaal meesha taalay ma la sii qorsheeyay oo Weerarka ayeey qayb ka ahayd Mise Qaraxa ayaa meesha ku qabsaday oo iskeed ayeey isaga socotay.
Muxuu ahaa Qaruxu, Nooca iyo Cabirkiisa,?
Saraakiisha Amniga waxay ku qiyaaseen Qaraxan qiyaastii 500 kilogrammes (1,100 pounds) iyo 2 Tonnes, taasoo qiyaastii u muuqata inuu ku cabir ahaa Qarixii loo adeegsaday Safaaradda Maraykanka ee Nairobi Sannadkii 1998-dii, kaasoo ay ku dhinteen 213 Qof.
Qaraxyaddii hore ee Muqdisho kan ugu wayn waxa uu ahaa Qiyaastii 800 Kilo iyo 1 Tonne, balse Khasaarihu way ka yaraayeen kii Sabtiddi, Waxaana uu yahay Farqiga u dhaxeeya Tonne-ka oo ah Culaabta ama Miisaanka Qalabka ku raran Gaariga ee kaabaya Qaraxa, kaasoo ku laba jibaaran Culayska Qaraxyaddii hore ee ka dhici jiray Muqdisho.
Qaraxa Sabtiddii waxa uu burburiyay Masaafo dhan 1 KM, taasoo muujinaysa Awoodda Qaraxa, Waxaana Qaraxan uu ka samaysnaa Walxo la farsameeyay oo Macmal ah, kuwaasoo ay ku jireen Kiimikooyin.
Qaraxan waxa uu si cad u muujinayaa Habacsanaanta Hay’adaha Ammaanka, kuwaasoo ku fashilmay inay ogaadaan, ama hor istaagaan Weerarkan Argagixisanimo, Xaqiijiyana Ammaanka Goobaha Istaraatiijiga ah ee Caasimadda.
Somalia kuma cusba in Alshabaab ay si fudud kaga gudbaan Koontarooladda wax lagu hubiyo ee Ciidanka Dowladda, inay Maleeshiyaadkoodu isticmaalaan Wadooyinka, si fududna ku gaaraan Bartilmaameedkooda, iyagoo isku ekeysiinaya Ciidanka Dowladda, balse tani waxay kaga duwan tahay waa Diyaargaroow waqti iyo Farsamo la galiyay oo ay ahayd in laga war helo inta Qorshe intaas le’eg ay diyaarinayeen Alshabaab.
Maxay u sheegan waayeen Alshabaab,?
Qarax Noocan ah in la fuliyo cidda awood u leh waa Alshabaab oo kaliya, Waana Kooxda kaliya ee isku duba ridi karta Weerar Farsamo ahaan Noocan ah.
Balse Kooxdu kuma cusba inaysan sheegan Weeraro caynkan oo kale ah, horay waxay uga aamuseen Weerarkii 2009-ka Hotel Shaamoow lagu laayay Arday ka Qalin jabinaysay Jaamacadda Banaadir iyo Macalimiintoodii oo ay ku jireen Dhaqaatiir Caan ah. Waxaana ku dhintay Weerarkaasi 23 Qof, Mana aysan sheegan Kooxda Alshabaab, Laakiin way muuqatay inay ahayd Farsamadoodii.
Muqtaar Rooboow Abuu Mansuur oo waqtiga ay Kooxdu fulisay Weerarkaasi Hotel Shaamoow ahaa Hogaamiye Xigeenka iyo Afhayeenka Alshabaab ayaa hadda isaga oo dhinaca kale ka soo jeeda aaminsan in Weerarkan ay samaysay Kooxda Alshabaab, isagoo waliba muujiyay inay u huban tahay arrintaasi.
Rooboow waxa uu ka war hayaa intii uu Kooxda ka tirsanaa Weeraro badan oo dhacay oo ay soo abaabuleen inaysan sheegan, sababo la xiriira in Fal Celinta ka timid oo ahayd mid aan wanaagsanayn, Sida Weerarkii Shaamoow oo Shacabku ka carooday.
Sababta ugu wayn ee ku qasabtay Kooxda Alshabaab inaysan sheegan weerarkan waxaa loo aanaynayaa inay ka baqanayaan Kacdoon Shacab iyo inay iyaga dhexdooda kala jabaan, marka loo eego Khasaaraha baaxadda leh ee ka dhashay Weerarkaasi, iyo Caradda Shacabka oo gaartay inay meel iska dhigaan cabsi galintii Kooxda Alshabaab.
Weerarka kadib waxay Dadka Soomaaliyeed muujiyeen Isku duubnaan aan horay u dhicin, Waxaana la dareemay mar qura Soomaaliya oo dhan in Dadka ay si isku mid ah uga Caroodaan ficilkaasi Waxashnimadda ah.
Madaxda Dowladda oo aan waagii hore looga baran inay soo dhex galaan Shacabka, qaybna ka noqdaan Gurmadka ayaa la arkayay iyagoo Dhismayaasha burburay dhinacooda ka baadi goobaya Raqda dadka ku hoos jira, Isla markaana waqti ku bixinaya inay ka shaqeeyaan Xarunta Gurmadka Degdega ah, Waxaa sidoo kale ahayd wax ku cusub Shacabka Madaxwaynihii, Raiisul Wasaarihii, Gudoomiyaha Gobalka Banaadir oo tan iyo markii ay wax dhaceen aan ka maqnaan Gurmadka Musiibadan, iyagoo ku deeqaya Dhiigooda, Xooggooda iyo Waqtigooda, taas badalkeeda waxay soo cidleeyeen Xafiisyaddii Quruxda badnaa ee ay ku jireen, waxayna guteen Waajibkii saarnaa iyagoo Waqtigooda inta ugu badan ku qaatay Goobaha Caafimaadka, Xarumaha Gurmadka, Khabuuraha lagu aasayo Maydkadka, Dhismayaasha Burburay, iyo illaa ugu dambayn ay ku hubsadeen Qayb ka mida Dhaawacyadda Diyaarado Dibadda loogu daabulayay si loo soo daaweeyo.
Calanka Jamhuuriyadda ayaa hoos loo dhigay, Waxaana lagu dhawaaqay 3 Maalmood Baroor Diiq ah oo lagu xasuusanayo Walaalihii aan ku waynay Musiibada Qaraxaasi.
Dalalka Soomaaliya Saaxiibka dhabta ah la ah iyo kuwa kale ayaa la kala bartay, Waxaa Soomaaliya Gurmadkii ugu h0reeyay uu ka soo gaaray Walaalahooda Rumaad ee Turky, Jabuuti ayaa ku xigsatay, Kadibna waxaa iska daba yimid Gurmad ka kala yimid Dalalka Maraykanka, Qadar, iyo Kenya.
W.Q: C/casiis Afrika
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/03/xog-muhiim-ah.jpg 201 251 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-18 17:35:052017-10-18 17:35:05Nooca qarixii Zoobe, halka uu ku socday, iyo sababta Shabaab u sheegan waayeen!!
Sheekh Abdurahman Bashiir oo Fariin u diray Shacabka Soomaaliyeed. Xog lama filaan ah oo kasoo baxeysa Waxyaabihii saarnaa gaadhigii loo adeegsaday...